MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 927
>Aung Tha Nge - Poem - Hope
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး အနုပညာရှင်တွေ လက်မှတ်ထိုး
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ (4th June, Wednesday)
>ိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသားဟောင်း ဒေၞခင်မာအေး ကယ်ြလန်ြမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ဧ္ဘပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ)ူမန်မာိုိံ့င်ငံရေးလပ်ြရြားမတြငြ် ထင်ရြားသူတစ်ဦူးဖစ်သော ဒေၞခင်မာအေးသည် ယမန်နေႚညက ရန်ကုန်္ဘမြိႚတငြ် ကယ်ြလန်ြသြားသည်။ ဒေၞခင်မာအေးသည် ကယ်ြလန်ြခဵိန်တငြ် အသက် ၆၈ိံစ်ြခန်ႚရ္ဘြိပီူဖစ်သည်။...
>အတြေးအူမင် အမတြ် (၁၉၂) – သေမြာေုကာက်သောစိတ်
> သေမြာေုကာက်သောစိတ်အတြေးအူမင် အမတြ် (၁၉၂)ဧူပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ လူသည် သေမြာေုကာက်သည်။ သေမြာေုကာက်ူခင်းသည် လူပီသူခင်ူးဖစ်၏။ ဗုဒ္ဌဘာသာ ကဵမ်းဂန်မဵား အလိုအရ ဆိုလ္တွင် လောက၌...
>လူထုဒေၞအမာအား ဂၝရ၀ူပအြစီအစဉ်မဵား ထိုင်ိးုိံင်ငံတငြ်ူပလြုပ်
> လူထုဒေၞအမာအား ဂၝရ၀ူပအြစီအစဉ်မဵား ထိုင်ိးုိံင်ငံတငြ်ူပလြုပ်ဓာတ်ပုံသတင်း ဧ္ဘပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ မုကာသေးမီက ကယ်ြလန်ြသြားခဲ့သော စာရေးဆရာမဋ္ဌကီး လူထုဒေၞအမာ (အသက် ၉၃ိံစြ်)အား ရည်စူး၍ ထိုင်ိးုိံင်ငံ၊ မဲဆောက်္ဘမြိႚ စာပေခဵစ်သူမဵား စုဝေးတတ်သော...
>စစ်အစိုးရက အမြာူးပင်ဆင်ူပီူးဖစ်ေုကာင်း
> စစ်အစိုးရက အမြာူးပင်ဆင်ူပီူးဖစ်ေုကာင်းဓာတ်ပုံသတင်းဧူပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အေူခခံဥပဒေကိုပင်ဆင်ခငြ့်ကို ခဲယဉ်းအောင် ထည့်သငြ်းထားသည့် စာပိုဒ်သည် အမဵြိးသားညီလာခံမိူံငြ့် ကြဲလြဲနေေုကာင်း သတင်းဌာနမဵားက ထောက်ူပူပီးနောက် စစ်အစိုးရက အမြာူးပင်ဆင်ေုကာင်းေုကညာလိုက်သည်။ ထို...
>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008
> From Ludu Daw Ah M… No tags for this post. Related posts No related posts.
>တရုပ်အစိုးရကိုိုိံင်ငံတကာမြာ ကန်ႚကက်ြဆိံ္ဋူပ
> တရုပ်အစိုးရကိုိုိံင်ငံတကာမြာ ကန်ႚကက်ြဆိံ္ဋူပဓာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ဧ္ဘပီ ၉ ရက်နေႚက တရုပ်အစိုးရအား ဆန်ႚကဵင်ကန်ႚကက်ြနေသော အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု၊ ဆန်ဖရန်စင်္စက္ဘိုမြိႚ၊ ဂိုးဒင်းဂိတ်တံတားပေၞမြ တိဘက်ိံငြ့်ူမန်မာ့အရေး လပ်ြရြားသူမဵား။ အိုလံပစ်ပဲတြော်အား...
> လူထုဒေၞအမာစဵာပနသိုႚပေးပိုႚသည့် အင်းစိန်ထောင်မသြ၀ဏ်လြာဓာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈၂၀၀၅ ခိုံစ်ြက စာရေးဆရာမဋ္ဌကီး လူထုဒေၞအမာအား သြားရောက်ဂၝရ၀ူပသြည့် ၈၈မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားမဵာိးံငြ့်တြေႚရစဉ်။ကိုကိုဋ္ဌကီး၊ ကိုမအေး စသည့် ထင်ရြားသည့်ိုိံင်ငံရေးခေၝင်းဆောင်မဵားက မုကာသေးမီက ကယ်ြလန်ြခဲ့သော လူထုဒေၞအမာစဵာပနသိုႚ အမြာစကား ပေးပိုႚခဲ့သည်။ မိုးမခက...
> အေူခခံဥပဒေသုံးသပ်ခဵက်ဆိုင်ရာ စာရက်ြစာတမ်းမဵား ပဵံႚြိံႚနေဓာတ်ပုံသတင်းဧူပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ူမန်မိာုိံင်ငံအတငြ်း လြဵြိႚ၀ကြ်ူဖန်ႚဝေနေုကသော စာအုပ်ငယ်မဵား။ ပုံတငြ် တြေႚရသော စာအုပ်ငယ် ၂အုပ်တငြ် စာမဵက်ြိာံ ၃၃ မဵက်ြိာံစီပၝရ္ဘြိပီး၊ စစ်အစိုးရ စိတ်တိုင်းကဵ ရေးဆဲထြားသည့် ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵပ်ြပုံ...
> မဲပေုးကပၝဗဵြိႚ တဲ့ ဓာတ်ပုံသတင်း ဧူပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ မေလ ၁၀ရက်နေႛ၌ ကဵင်းပမည်ဟု ဆိုသော ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵပ်ြပုံ အေူခခံဥပဒေဆိုင်ရာ လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲအတကြ် ယမန်နေႚက ရန်ကုန်္ဘမြိႚတငြ် သ႟ုပ်ူပ လေ့ကဵင့်နေစဉ်။ (Photo:...
>ဆရာုကီးေုကးမုံဦးသောင်း (အောင်ဗလ) စဵာပနအခမ်းအနာူးမင်ကငြ်း
> ဆရာုကီးေုကးမုံဦးသောင်း (အောင်ဗလ) စဵာပနအခမ်းအနာူးမင်ကငြ်း သတင်းဓာတ်ပုံ ဧူပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ်ပုံ ကေဵာ်သက်၊ မိုးမခ) No tags for this post. Related...
>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007
> ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးက သံဃာတော်တွေရဲ့ အသံ(ဦးဃောသိတ နဲ့ ဦးပညာသီရိ)ံမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၁ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမှာ သံဃာတော်တွေ စတင်ခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်း တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက ထပ်ချပ်မကွာ...
>သတင်းစာဆရာုကီးေုကးမုံဦးသောင်း(ခ)အောင်ဗလ စဵာပန အခမ်းအနား ကဵင်းပမည်
> သတင်းစာဆရာုကီးေုကးမုံဦးသောင်း(ခ)အောင်ဗလ စဵာပန အခမ်းအနား ကဵင်းပမည်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဧူပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ယနေႚညနေ ညနေ ၅း၀၀နာရီ မြ ၈း၀၀နာရီ အတငြ်း အခမ်အနားကို ကဵင်းပမည်ူဖစ်ပၝသည်။ အခမ်းအနား...
>Sasana Moli set April 26th as the date to start the boycott campaign on Junta’s referendum
> သာသနမောဠိအဖွဲ့ချုပ်ဆရာတော်များက ဧပြီ ၂၆ တွင် အခမ်းအနားဖြင့် စစ်အစိုးရ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက် ချီတက်ပွဲကို စတင်မည် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ စစ်အစိုးရဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက် ချီတက်သည့်...
> မြန်မာအလုပ်သမား ၅၄ဦး ကုန်တင်ယာဉ်အအေးခန်းအတွင်းမွန်းကြပ်သေဆုံး အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်သားအလုပ်သမားများ ကုန်ကားတစ်စီးအတွင်း ခိုးဝှက် လိုက်ပါလာရာ အနည်းဆုံး ၅၄ ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ယနေ့ ပြောဆိုသည်။...
>Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar , 93 Years
> Ludu Daw Ah Mar & Daw Aung San Suu Kyi – In memory of Ludu Daw Ah Mar...
>Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!!
> Hell Hound at large – Burmese Junta on the lose !!! April 9, 2008 No tags for this...
> တိုက်ပြဲုကားထဲက ပန်းခဵီဧူပီ ၉၊ ၂၀၀၈ အရငြ် စိံ္ဋာမနော (Ashin Sandamanaw) ရဲႛ “တိုက်ပြဲတြေ ဘာလိုႛူဖစ်နေရတာလဲ” လိုႛ ခေၝင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ ပန်းခဵီကားလေးပၝ။ ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ်မြာရြိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းက ကလေးတဦးရဲႛ ဓာတ်ပုံကို...
>There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA
> There’s no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA – some photos –...
>There’s no place to host Chinese Olympic Touch in San Francisco
> ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ တရုတ်အိုလံပစ်အတွက် ပြေးစရာ မြေမရှိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဧပြီ ၀၉၊ ၂၀၀၈ ယနေ့နေ့ခင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကို တရုတ်အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင် ချီတက်ပွဲမှာ ထောင်နဲ့ချီသော ဆန္ဒပြကန့်ကွက်သူများကြောင့် အစီအစဉ်များကို ချက်ခြင်းပြောင်းလဲခဲ့ရသည်။ ကြေညာထားသော...
>မောင်စမြ်းရည် – အမေမာသိုႚ
> အမေမာ သို့မောင်စွမ်းရည်ဧပြီ ၉၊ ၂၀၀၈ အဘိုးဆုံး၍ညှိုးချုံးအားမာန်၊ ရှိခဲ့ပြန်သော်“မန်းတောင်” သဏ္ဍန်၊ “အလှ”ကျန်၍အားမာန်မကျ တင်းနိုင်ကြ၏။ အဘဆုံး၍ညှိုးချုံးအားမာန်၊ ရှိခဲ့ပြန်သော်“ချိုးဖြူ” သဏ္ဍန်၊ “အမိ” ကျန်၍အားမာန်မကျ၊ တင်းနိုင်ကြ၏။ “အမိ”ဆုးံသော်မဆုံး အားမာန်၊ ခွပ်ဒေါင်းကျန်ပြီဒေါင်းလံမြှင့်၍လွှင့်ကြကုန်။...
>အောင်ဝေး – မဲဆောက်လည်ူပန်
> မဲဆောက် လည်ပြန်အောင်ဝေးဧပြီ ၈၊ ၂၀၀၈ မဲဆောက် ရေ …ထမြောက်တဖန်ခွဲရပြန်ပြီ။ တိုင်းပြည်ကို စွန့်ခွာခဲ့တာလားတိုင်းပြည်က စွန့်ပစ်လိုက်တာလားဒဏ်ရာ ရ ထားနှလုံးသားရေ …အနားယူပေတော့။ ကြယ်ကြွေ ရေဆန်မုန်တိုင်းထန်လည်းတော်လှန်ရေးသစ်တို့ ရေးခြစ်မည်တနှစ်အတွင်းမြစ်တစင်းဟာ အတင်းတိုးဝှေ့လာတော့မယ်။ ခြင်္သေ့...
>Ludu Daw Ah MAr – 93 Years – Photo Album
> No tags for this post. Related posts No related posts.
>မိုးမခ – လူထုဒေၞအမာ ၉၃ိံစြ် အမတ်ြတရ စာမဵက်ြိာံမဵားသိုႚ
> မိုးမခ – လူထုဒေၞအမာ ၉၃ိံစြ် အမတ်ြတရ စာမဵက်ြိာံမဵားသိုႚ No tags for this post. Related posts No related posts.
>From Thai to Burmese junta; "We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …"
> From Thai to Burmese junta; “We are totally religious … we will vote ‘YES’ to each other …”...
>လူထုဒေၞအမာ နာရေး သတင်းစာတငြ် ဖော်ူပထား
>မောင်ရစ် – အဖိုးအဖြားတြေ မရြိတော့တဲ့ တိုင်ူးပည်
> အဖိုး အဖွားတွေ မရှိတော့တဲ့ တိုင်းပြည် မောင်ရစ်ဧပြီ ၇၊ ၂၀၀၈ ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့က သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာ ကြေးမုံဦးသောင်း (အောင်ဗလ) ၈၂ နှစ် အမေရိကန်ပြည် ဖလော်ရီဒါမှာ...
>၀င်းပေၞမောင် – ၀မ်းနည်းကဗဵာ
> ၀မ်းနည်းကဗျာဝင်းပေါ်မောင်ဧပြီ ၈၊ ၂၀၀၈ ပြည်တွင်းမှာ အမေမာပြည်ပမှာ အဘသောင်း။ ကလောင်ဘုရားတွေမို့ထက်ဖျားမှာ စံဝင်ကိန်းအေးငြိမ်းစေကြောင်း။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>မောင်စမြ်းရည် – အမေမာ ကယ်ြလန်ြခဵိန်
> အမေမာ ကယ်ြလန်ြခဵိန် မောင်စမြ်းရည်ဧူပီ ၇၊ ၂၀၀၈ အမိမဲ့လည်းမမဲ့ အားမာန်တိုက်ပြဲကဵန်ခဲ့ဒေၝင်းမာန်တေူးဖင့်မိကေဵးဇူးဂုဏ်ူမငြ့်တင်ုကစိုႛ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado
> Photo Albums on Protest – Music Concert at Denver, Colorado against China Olympic by multinational, multi racial and...
>ရဲရင့်သက်ဇြဲ- အမေမာ ထာဝရမသေပၝ
> အမေမာ ထာဝရမသေပၝရဲရင့်သက်ဇြဲဧူပီ ၇၊ ၂၀၀၈ မရဏမင်းရဲႛသိမ်ဖဵင်းတဲ့အမိန်ႛသံဟာကဵန်းမာရေး မကောင်းသူတယောက်ရဲႛနေကောင်းထိုင်သာ ရြိမမြဵြိးနဲႛဧ္ဘပီလ ၇ ရက် မနက်ခင်းကိုဖဵားယောင်း သြေးဆောင်သြားခဲ့တယ် ။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရငြ်းအင်ဖော်မေးရငြ်းတက္ကိုံလော်ဂဵီနည်းပညာ တိုးတက်မမြဵားကကမ္တာဋ္ဌကီးကိုရြာဋ္ဌကီးတရြာူဖစ်စေခဲ့္ဘပီ …အဲဒီ ရြာဋ္ဌကီးထဲမြာဧ္ဘပီလ ၇...
Page 927 of 948«1...925926927928929...948»